Ukufakwa Kwezingxenye Zemijovo - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Ingxenye yomshini ihlanganiswa nezindawo eziningana. Ukuze ufunde ubudlelwane obuhlobene nobuso bezingxenye ezithile, kufanele kubhalwe isithenjwa. I-reference iyinhloko, umugqa, noma ubuso ebusweni esetshenziselwa ukunquma isikhundla samanye amaphuzu, imigqa, noma izakhiwo. Ngokusho kwemisebenzi ehlukene yesibonakaliso, isibonakaliso singahlukaniswa ngezigaba ezimbili: ukulinganisa ukulinganisa kanye nenqubo yokuhlola.
1. Isisekelo sokwakha
I-reference esetshenziselwa ingxenye yokudweba ukucacisa isimo samanye amaphuzu, imigqa, kanye nezindawo ezibizwa ngokuthi i-datum design. Njengoba kuboniswe ku- [cc2] engxenyeni yomkhonto ekhonjiswe ku-Figure 32-2, inkomba yokuklama yendilinga ngayinye yangaphandle kanye nomgodi wangaphakathi yinkomba ye-axis ingxenye, futhi ubuso bokuphela kuyi-reference design ye-face B ne-C I-axis yomgodi wangaphakathi ingumbuthano wangaphandle. Isithenjwa se-Radial jumping.
2. Inkomba yezinqubo
Inkulumo esetshenziselwa ukucubungula nokuhlanganiswa kwezinxenye ibizwa ngokuthi inqubo yokubhekisela. Ngokusekelwe ekusetshenzisweni okuhlukene, amazinga okusebenza ahlukaniswe ngamazinga omhlangano, amazinga okulinganisa namazinga wokubeka.
(1) Isithenjwa somhlangano I-reference esetshenziselwa ukucacisa isikhundla senxenye engxenyeni noma umkhiqizo lapho ihlanganisiwe ibizwa ngokuthi i-reference reference.
(2) I-datum yokulinganisa A datum esetshenziselwa ukuhlola usayizi kanye nesimo sendawo yomshini kuthiwa i-datum. Njengoba kuyingxenye yomdwebo 32-2, i-hole hole yangaphakathi yinkomba yokulinganisa ukuhlola ukugijima kwe-radial yangaphandle; futhi indawo A isingeniso sokulinganisa ukuhlola ubude nobukhulu besamba esikhulu.
(3) Ukubeka i-reference reference Isithenjwa esisetshenziselwa ukubeka umsebenzi wokusebenza ngesikhathi sokufakelwa kubizwa ngokuthi i-reference reference. Njengobuso (noma umugqa, iphuzu) lokubhekisela kokubeka indawo, kuphela indawo engavamile yokungena ingabhalwa ekusebenzeni kokuqala. Le ndawo yokubeka indawo ibizwa ngokuthi i-reference coarse. Ezinkambeni ezalandela, indawo engasetshenzisiwe ingasetshenziswa njengencazelo yokubeka indawo. Le ndawo yokubeka indawo ibizwa ngokuthi ireferensi enhle.